Tag: elekọta mmadụ media | Martech Zone
Wenezdee, Machị 10, 2021 Monday, March 15, 2021 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị bụ nnukwu nzukọ, enwere ihe isii dị oke mkpa nke ngwanrọ nke ngwa ọrụ ịchọrọ oge niile: Akaụntụ Akaụntụ - ikekwe ihe kachasị rịọrọ nke usoro ọrụ ụlọ ọrụ ọ bụla bụ ikike iji wuo usoro nlekọta akaụntụ n'ime azịza ya. Yabụ, ụlọ ọrụ nne na nna nwere ike ibipụta n'aha akara ma ọ bụ aha dị n'okpuru ha, nweta data ha, nyere aka n'ịgbasa na ijikwa ọtụtụ akaụntụ, yana ijikwa ohere. Usoro nkwado - ụlọ ọrụ na-ahụkarị
Social Media Ahịa 101
Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Satọde, Febụwarị 27, 2021 Douglas Karr
Kedu ka m si bido na soshal midia? Nke a bụ ajụjụ m ga - enweta mgbe m na - ekwu maka mmetụta mgbasa ozi mmekọrịta na azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa. Nke mbu, ka anyi tulee ihe mere ndi kompeni gi gha acho itinye aka na mgbasa ozi. Ebumnuche Mere Business ji Jiri Social Media Marketing Nke a bụ nnukwu onye na-akọwa vidiyo na ụzọ 7 nke ahịa ahịa mgbasa ozi gị nwere ike isi mee ka nsonaazụ azụmahịa. Otu esi amalite na mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Mọnde, Febụwarị 22, 2021 Tuesday, February 23, 2021 Douglas Karr
Y’oburu na enwerem obi uto n’ile gi n’ihu mmadu, Obi siri m ike na d gha ahu m n’onye oma, ihe na-ato-ọchị, ma nwee obi ebere. Ma, ọ bụrụ na ahụtụbeghị m gị na ihu, ana m atụ egwu ihe ị nwere ike iche banyere m dabere na ntanetị mmekọrịta m. Abụ m onye nwere mmasị. Enwere m obi ụtọ banyere ọrụ m, ezinụlọ m, ndị enyi m, okwukwe m, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị m. M hụrụ n'anya mkparịta ụka na nke ọ bụla n'ime isiokwu ndị ahụ… ya mere, mgbe mgbasa ozi
SEOReseller: White Label SEO Platform, Reporting na Ọrụ maka genlọ Ọrụ
Sọnde, Febụwarị 14, 2021 Sọnde, Febụwarị 14, 2021 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ na-elekwasị anya nanị na akara, imewe, na ahụmịhe ndị ahịa, mgbe ụfọdụ, ha enweghị njikarịcha njin ọchụchọ (SEO). Nke a apụtaghị na ha agaghị enwe ihe ịga nke ọma maka ndị ahịa ha - ha na - abụkarị. Mana ọ pụtara na nloghachi ha anaghị enwetakarị ikike zuru oke iji nweta azụmaahịa ọhụụ. Nnyocha adịghị ka ihe ọ bụla ọzọ ọ bụla n'ihi na onye ọrụ na-egosi n'ezie ebumnuche maka ịzụta. Mgbasa ozi ndị ọzọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya